Mayelana NATHI - Shenzhen Sihai Packaging Material Co., Ltd.
Ukupakisha kwe-Shenzhen Sihai
Impahla Co., Ltd.
I-Shenzhen Sihai Packaging Material Co, Ltd.iyinkampani yemikhiqizo yokufaka ishidi engenalutho eShenzhen China, sineminyaka engaphezu kwengu-12 ku-pp plate sheet, pp sheet engenalutho, pp sheet lukathayela (futhi yaziwa njenge-pp corflute sheet, pp coroplast sheet , pp ibhodi elingenalutho) imikhiqizo yokupakisha. Kk ishidi lukathayela, kk ishidi elingenalutho kuyinto entsha yokupakisha engasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezimboni, ibhodi le-pp liyinto eguquguqukayo yokupakisha ingenziwa noma yiluphi usayizi, noma yikuphi ukwakheka nemikhiqizo yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso.
Sisebenza ngokukhethekile ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekusetshenzisweni kwamashidi we-pp, ishidi elingenalutho, amabhokisi we-pp, amabhokisi amashidi we-pp, ukwahlukanisa kwe-pp, izimpawu ze-p. imikhiqizo engaphezu kwengu-12. Imikhiqizo yethu isetshenziswe kabanzi ekupakisheni, ekuphrinteni, ezintweni ezisebenza ngogesi, emabhokisini okudlulisa, imishini yokukhanya, ikhemisi, isibulala-zinambuzane, ukukhangisa, ukuhlobisa, izindatshana zamasiko kanye nobunjiniyela be-biologic.
Inkampani yethu inezintambo ezintathu zokukhiqiza ishidi elingenalutho, ezingakhiqiza ibhodi elingenalutho lokucaciswa okuhlukahlukene ngosayizi we-2mm-12mm, ububanzi obukhulu be-2300mm nobude obungenamkhawulo, okukhipha nyangazonke amathani angaphezu kuka-120.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ishidi elingenalutho le-PP, zonke izinhlobo zombala nokujiya kk ishidi elingenalutho (iphepha lukathayela), ungqimba lwesilayidi, ikhadi lokwahlukanisa, ibhokisi lokuthengiselana kanye ne-anti-static sheet eziyize, imikhiqizo yokupakisha ye-ESD. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ezintweni ezisebenza ngogesi, ipulasitiki yehardware, umhlobiso wasekhaya, umhlobiso wokukhangisa, izithelo nokupakisha kwemifino, umthwalo, ikalishi lezingane, izingxenye zezimoto, ukugcoba ingilazi nezinye izimboni.
Sineqembu lobuchwepheshe, ukuphathwa okuqinile, imishini emihle kakhulu yokwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Siphinde sibe ngumhlinzeki wesikhathi eside wamaqembu e-TCL ne-HUAWEI. Siphinde sibe nenkonzo ye-OEM ne-ODM, insizakalo ye-OEM ne-ODM iyahlupha kumakhasimende. Ukwenza ngcono ukwaneliseka kwamakhasimende nokudlula okulindelwe ngamakhasimende ukuzibophezela okubalulekile kwenkampani yakwaSihai. Sinikeze ithuba lokufakazela ukuthi yini esingakwenzela yona ngokuxhumana nathi ukuze uthole ukubonisana kwakho kwamahhala.